SOMALITALK - STOCKHOLM
KU:- ISBAHAYSIGA DOOXADA JUBBA EE XOOGGA KU HAYSTA GOBOLKA JUBBADA HOOSE.
KU:- DHAMMAAN WAXGARADKA, ODAYAASHA, DHALINYARADA IYO HAWEENKA GOBOLKA JUBBADA HOOSE.
OG:- WAXGARADKA, AQOONYAHANADA IYO ODAYAASHA SOOMAALIYEED.
OG:- URURKA IGAD.
UJEEDDO:- BAAQ IYO DIGNIIN.
Ururka horumarinta Gobolka Jubbada Hoose, wuxuu la socodsiinaayaa dhammaan dadweynaha Gobolka Jubbada Hoose wada dega iyo dhammaan Ummadda Soomaaliyeed ee ka soo horjeeda dhibaatada iyo gumaadka loo geysanaayo dadka Gobolka Jubbada Hoose u dhashay " in aysan jirin wax heshiis ah oo ay wada gaareen dadka u dhashay Gobolka Jubbada Hoose iyo kooxada la magac baxday Dooxada Jubba ee gumaadka iyo barakicinta ku haysa dadka u dhashay deegaanka Gobolka J/Hoose".
Waxaa is-weydiin leh yaa lala galay heshiiyada la sheego oo ka dhaca Kismaayo? Goormuu heshiis dhici karaa? Yaa matali kara dadka Gobolka Jubbada Hoose?
Waxaan filaynaa qof walba oo wax garad ah in uu fahmi karo waxa ka dambeeya heshiisyadan beenta ah, barabugaandadan rakhiiska ah ee lagu qaldaayo dadweynaha Soomaaliyeed. Waa heshiis been ah oo looga dan leeyahay in lagu kala burburiyo midnimada iyo wada jirka maantay ay gaareen dadka Gobolka Jubbada Hoose ee u halgamaaya sidii ay deegaankooda dib ugu soo noqon lahaayeen. Qoraalada beenta ah ee lagu soo shaacinaayo web-site-yada waxaanu leenahay waxba kama jiraan. Aaway magacyada dadka heshiiska galay? Dadka u dhashay deegaanka Gobolka Jubbada Hoose ma dad aan la garanaynbaa? Mise waxaa heshiiskan beenta ah wada galay kuwii ku soo duulay Gobolka oo ku kala qaybsanaaya deegaannada Gobolka kadib markii ay ku heshiin waayeen maamulkiisa.
Runtu waxay tahay Ummadda Soomaaliyeed in ay maantay ka gudbayso been abuur iyo kala qaybin iyo isku dir la isku diro dadka deegaannada u wada dhashay ee walaalaha ah. Xaqiiqaduna waxay noqnaysaa Gobolka Jubbada Hoose in ay maamuli doonaan siyaasaddiisa, hoggaanimtiisa iyo dhaqaalihiisaba dadka u dhashay ee laga barakiciyay deegaankooda.
Dooxada Jubba; waxaanu leenayahy isaga baxa Gobolka Jubbada Hoose dadkiisu way mideysan yihiin maantay. Si wada jir leh ayay uga wada tashanayaa aayaha dadkooda iyo Gobolkoodaba. Ma ogtihiin Xoogii aad ku dhisnaydeen ( waa kooxda Cartee ) way burbureen, waqtigiina waa u dhammaaday ee dadkiina dhinac ka raaca. Dib ugu noqda Gobollada aad ka timaadeen. Idinkoo matalaaya Gobolladiina ka soo qayb gala madasha lagu heshiisiinaayo Soomaaliweyn ee ka socda dalka Kenya.
Ummadda Soomaaliyeed waxaanu ugu baaqaynaa in ay meel uga soo wada jeestaan kuwa doonaaya in ay xoog ku maamushaan Gobollo iyo deegaanno aysan lahayn. Waxaanu taageersanahay in Soomaaliya Dowlad laga dhiso oo ay ka baxdo duliga, dilka, boobka, dhaca, kufsiga iyo kala qaybinta. Soomaaliyeey dadka iyo dalkuba ha loo gurmado sidii dowlad looga dhisi lahaa.
( Maxamed Muuse Cabdi "Jabros")
= GUDDOOMIYAHA URURKA =
QORAALADII HORE EE UHGJH
Xasan Abshir iyo Deerow oo Shir Jaraa'id Qabtay
iyo Kipligat oo sheegay in shirku u gudbayo wajigiisii 3-aad iyo Shir ay yeesheen Cismaan Caato, Muuse Suudi, Cumar Filish, Qanyare iyo TNG-a Muqdisho ... GUJI.. 30/4